I-Nandrolone Decanoate White Raw Powder Deca300 Anabolic Mestanolone For Muscle Building CasNO.360-70-3/DECA
Igama Lomkhiqizo:I-Nandrolone Decanoate
Izinga lokushisa lesitoreji:2-8°C
Ukunyibilika okungu-45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin:0.8mg/mL
Ukubukeka:impushana emhlophe kuya kokuphuzi
Nandrolone Decanoate Incazelo
I-Nandrolone decanoate iwuhlobo lomjovo lwe-anabolic steroid.I-Nandrolone decanoate ibonisa izimfanelo ze-anabolic ezinamandla ngokuqhathaniswa.I-testosterone ehlukile, noma kunjalo, isenzo sokwakha izicubu ze-Nandrolone decanoate sihanjelwa yizindawo ezibuthakathaka ze-androgenic.Izimfanelo ezinesizotha ze-nandrolone decanoate zenze ukuba kube phakathi kwama-steroid ajova kakhulu e-pop emhlabeni jikelele, athandwa kakhulu abasubathi ngamandla ayo okukhuthaza amandla abalulekile kanye nokunyuka kwesisindo somzimba ngaphandle kwemiphumela emibi ye-androgenic noma ye-estrogenic.
Isicelo se-Nandrolone Decanoate
I-Nandrolone decanoate ilahlwa kabanzi ezimakethe zezidakamizwa zabantu nezezilwane.I-Nandrolone decanoate iwuhlobo oluguquliwe lwe-nandrolone.Ama-Esterified steroids ahlongozwa ukwelula iwindi lomphumela wokwelapha ngokulandela ukulawulwa, okuvunyelwe idokhethi lomjovo wezikhathi eziphansi uma kuqhathaniswa nemijovo ye-steroid yamahhala (engaqinisekisiwe).I-Nandrolone decanoate inikeza phezulu okubukhali ekukhululweni kwe-nandrolone amahora angu-24-48 ahambisana nomjovo ojulile we-intramuscular, ohlale wehla eduze kwamaphuzu okuqala mayelana namaviki angu-2 kamuva.Uhhafu wempilo ye-deca cishe yizinsuku eziyisi-6, kodwa kuthatha cishe izinsuku ezingama-21 ukuthi ikhishwe ohlelweni lwakho.Umthamo wamadoda uzungeze i-400-600mg ngesonto.
I-Hjtc (Xiamen) Industry Co., Ltd. iyibhizinisi lokuhlola lezinto zokusetshenziswa kwemithi eChina.Futhi ifektri ingumhlinzeki wohlobo olusha ochwepheshile we-Pharmaceutical Packaginga &Steroids Raw Materials .Ifekthri yasungulwa ngoJulayi 2008 iqembu laphesheya kwezilwandle lwe-PhD kanye nochwepheshe bezohwebo abanolwazi e-Hubei, e-China.I-Biocar izibophezele ukuvela njengohamba phambili kwezokukhiqiza, ukumaketha kanye nenkonzo ye-CMO Yezithako Zemithi Ezisebenzayo, I-Intermediates kanye ne-Herb Extract yokuphila emhlabeni wonke I-Science Companies. kanye neChina.Umsebenzi wethu ukuletha imikhiqizo ezimakethe ngendlela ephumelela kakhulu nangempumelelo ngokwenani eliphezulu nangekhwalithi.Ukuthunyelwa kwethu kwamanye amazwe kufinyelela emazweni angaphezu kuka-108 ngamagatsha, izikhungo ezingaphansi nokusabalalisa inethiwekhi esakazwa kulo lonke elaseYurophu, eNyakatho Melika, e-Asia, ,iNingizimu Melika kanye ne-MEA.Sigxile kakhulu ekwengezeni inzuzo embonini yezemithi yomhlaba wonke ngokusebenza njengozakwethu othembekile.
1, Ikhwalithi ephezulu ngentengo yokuncintisana:
1) Okujwayelekile: USP Standard
2) Konke Ukuhlanzeka≥99%
3) Singabakhiqizi futhi singahlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngentengo yefekthri.
2, Ukulethwa okusheshayo nokuphephile
1) Iphasela lingathunyelwa emahoreni angama-24 ngemuva kokukhokha.Inombolo yokulandelela iyatholakala
2) Ukuthunyelwa okuvikelekile futhi okuhlakaniphile.Izindlela zokuthutha ezahlukahlukene ozikhethele zona.
3)Izinga lokuphasa ngokwesiko ≥99%
4) Sine-ejenti yethu/umthengisi/umsabalalisi ongasisiza ukuthi sithumele imikhiqizo yethu ngokushesha okukhulu futhi ephephile, futhi sinesitoko lapho ukuze sidluliselwe.
3, Sinamakhasimende emhlabeni wonke.
1) Isevisi yobungcweti nolwazi olucebile kwenza amakhasimende azizwe ekhululekile, isitokwe esanele kanye nokulethwa okusheshayo kuhlangabezana nesifiso sabo.
2)Impendulo yemakethe kanye nempendulo yezimpahla izobongwa, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende kuwumthwalo wethu.
3) Ikhwalithi ephezulu, intengo yokuncintisana, ukulethwa okusheshayo, isevisi yezinga lokuqala ithola ukwethenjwa nodumo kumakhasimende.
1. Noma yimiphi imibuzo izophendulwa engakapheli amahora angama-24.
2. Ukuzinikela kukhwalithi, ukuhlinzeka & nesevisi.
3. Ngokuqinile ekukhetheni izinto zokusetshenziswa.
4. I-OEM/ODM Iyatholakala.
5. Intengo enengqondo & encintisanayo, isikhathi sokuhola esisheshayo.
6. Isampula iyatholakala ukuze uhlolwe futhi uthuthukiswe.
I-Cardarine / GW-501516
I-Andarine / S4
I-Ligandrol / LGD-4033
I-Anesthetic / Pain Killer
Okunye Okuphakathi Kwemithi
Imikhiqizo Eshisayo Yokuthengisa
I-CJC-1295 ngaphandle kwe-DAC
I-Pentadecapeptide BPC 157
0.1mg / ibhodlela
Q1:Ungaqinisekisa kanjani Ikhwalithi Yomkhiqizo ngaphambi kokufaka ama-oda?
A:amasampuli amahhala ayatholakala, kodwa izindleko zempahla zizoba ku-akhawunti yakho futhi izindleko zizobuyiselwa kuwe noma zidonswe e-oda lakho ngokuzayo.
Q2:Unganginika intengo yesaphulelo?
A:Ngokuqinisekile, kuncike ku-qty.I-oda lakho elikhulu lingajabulela intengo eshibhile.
Q3:Uma uthumela i-oda lami?
IMP: Ngokujwayelekile zingakapheli izinsuku ezi-2 kuya kwezingu-3 ngemuva kokuqinisekisa inkokhelo yakho, ngoba sidinga isikhathi sokuhlela ukupakishwa kwe-Stealth ukuze uthole imvume engu-100%.
Q4:Ungaqinisekisa ukuthi ngingazithola izimpahla zami ngaphandle kwenkinga yangokwezifiso?
Yebo, Sinesevisi Yokuthumela kabusha.Ungathola izimpahla zakho ngaphandle kwenkinga.
Q5: Usiphatha kanjani isikhalazo sekhwalithi?
A: Okokuqala nje, ukulawula kwethu ikhwalithi kuzonciphisa inkinga yekhwalithi ifinyelele kuqanda.Uma kunenkinga yekhwalithi yangempela edalwe yithi, sizokuthumelela izimpahla zamahhala ukuze zishintshwe noma sikubuyisele ukulahlekelwa kwakho.
Q6: Iluphi uhlobo lwemigomo yokukhokha owamukelayo?
A: Kunoma yiliphi i-oda, ungakhokha nge-Paypal, i-Bitcoin, i-T/T, i-Western Union noma i-Money Gram.
Q7: Ungaxhumana kanjani nathi?
A:Sisebenzisa i-imeyili, i-whatsapp, i-wickr me, i-wechat, njll.ngakho-ke pls khululeka ukuxhumana nami uma unezidingo.
Okwedlule: I-Proviron Raw Steroid Testosterone Ye-Muscle Gaining Mesterolone CAS 1424-00-6
Olandelayo: IHormone Yezemithi I-Nandrolone Decanoat Raw Material Raw powder Deca Durabolin Steroid White Powder Fitness Fitness Weight Loss
Hlanganisa I-Powder Yokwakha Umzimba
Izengezo Zokwakha Umzimba
I-Deca Durabolin powder
Ama-Steroid Okukhula Kwemisipha
I-Nandrolone Decanoate powder
Ikhwalithi ephezulu ye-Nandrolone Decanoate / Deca / Dura...
I-Nandrolone Decanoate White Raw Powder Deca300 ...
I-DECA Nandrolone Decanoate CAS: 434-22-0 Powder ...
Strong Anabolic Steroid Nandrolone Decanoate Po...